Sina Ahoana ny fampiasana signage dizitaly amin'ny fanamboarana ny lobby orinasa? orinasa sy mpanamboatra | SYTON
Signage nomerika portable
Monitor PC indostrialy
Mpilalao amin'ny Floor Stand
Aza mikasika Screen AD Player
Aza mikasika Screen Wall Mount AD Player
Net Version Wall tsoavaly dokambarotra Player
Mpandraharaha ivelany ivelany
Mijoroa Floor Outdoor doka Player
Wall Mount Outdoor doka Player Gear Reductor
Shoe poloney doka Player
Ahoana ny fampiasana signage dizitaly amin'ny fananganana lobby orinasa?
SYTON nametraka takelaka nomerika ho an'ny lobi an'ny orinasa. Ny asany dia misy ny vaovao, ny toetr'andro, ny sary an-tsary, ny lisitry ny hetsika ary ny asan'ny orinasa
Isan'andro, orinasa maro kokoa eto amin'izao tontolo izao no manomboka mampiasa takelaka nomerika mba hanomezana traikefa mahafinaritra sy mahafinaritra ary mahasoa ho an'ny lobian'ny orinasa. Avy amin'ny efijery fandraisana ka hatramin'ny katalaogy niomerika, ny signage dizitaly ao amin'ny lobby dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasanao. Raha te hampiasa takelaka nomerika koa ianao amin'ny fifandraisana anatiny.
Andao hijery fomba maro hampiasana signage dizitaly ao amin'ny tranoben'ny orinasa.
Mampiasà takelaka nomerika ao amin'ny efitrano malalaky ny orinasanao handefasanao tsara ny tantaran'ny orinasanao, ny iraka, ny fahitany, ny fetr'andro, ny mpandray anjara ary ny zava-bita ho an'ny mpanjifa mety ho mpiasa sy mpiasa vaovao. Ity fomba fizarana tantaran'ny orinasa ity dia ankehitriny, malaza ary manavao. Lahatsary fohy an'ny orinasa sy ny tantaran'ny fahombiazan'ny mpanjifa dia zavatra tsara ihany koa. Azon'izy ireo lazaina aminao ny tantaranao ary miaraka amin'izay dia manamafy ny antony sy ny maha samy hafa ny orinasanao.
Omeo fidirana mora foana amin'ireo mpitsidika anao ny fampahalalana momba ny lalana. Amin'ny fampiasana ny katalaogy niomerika, azonao atao ny manampy ny sarintany fitadiavam-pejy amin'ny finday, ny mombamomba ny olona, ​​ny isa, sns. Ny katalaogy niomerika dia azo havaozina amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny toerana misy anao, ary azonao atao ny mitanisa ireo mpanofa isaky ny gorodona, ny isa na ny filaharan'ny abidy.
Ho fanampin'ny lisitry ny katalaogy niomerika, azonao atao ihany koa ny manavaka ny atiny amin'ny efijery miaraka amin'ny hafatra arahaba ho an'ny vahiny sy mpanjifa manokana. Ireo hafatra ireo dia azo alamina mialoha mba ho lalaovina ho azy ary lany daty amin'ny daty sy ora voatondro.
Rindrin'ny horonan-tsary lobi
Rehefa miditra ao amin'ny tranoben'ny orinasanao ny mpitsidika dia ilaina ny mamorona fahatsapana voalohany mahasalama sy tsara. Io dia mamaritra ny toetran'ny mpitsidika mandritra ny fitsidihana. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany amin'ny fomba mahomby dia ny fampiasana takelaka nomerika an'ny orinasa miendrika rindrina horonantsary (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, sns). Ny rindrin'ny fahitalavitra dia hamela fahatsapana lalina sy miavaka. Ity dia fomba tsara iray hampiavaka ny marikao!
Mba hanampiana fahagagana fanampiny, azonao atao ny mandray ireo vahiny miaraka amina hafatra arahaba manokana miaraka amin'ny sary, lahatsoratra ary fampahalalana hafa mifandraika amin'ny vahininao. Azonao atao koa ny mampiasa ny rindrina horonantsary hanehoana ny atiny mahavariana rehetra, toy ny fampahalalana sy dokam-barotra momba ny vokatra vaovao, hetsika lehibe ho avy, vaovao momba ny orinasa ankehitriny ary fahana amin'ny haino aman-jery sosialy. Izy io koa dia ahafahana mifanerasera amin'ny mpanjifa manokana sy azo ampiharina, izay hahasarika ny mpitsidika sy ny vahiny indrindra.
Raha ampitahaina amin'ny fampiasana ny takelaka fanaovan-tsoratry ny afisy na takelaka takelaka dia zava-dehibe kokoa ny fiantraikan'ilay rindrina horonantsary. Rehefa dinihina tokoa, ny lobbying orinasa no tena manombohana ny mpitsidika rehetra, na mpitsidika vaovao na mpitsidika an-trano mody. Ka maninona no tsy ampiasainao ny takelaka nomerika ao amin'ny lobby mba hamoronana traikefa tsy hay hadinoina sy mahaliana ho an'ny vahininao, ny mpitsidika anao ary ny mpiasao, mba hahafahanao manararaotra tsara an'io fotoana io?
Touch Screen Interactive Kiosk , Outdoor Digital Signage Double , Self Service Interactive Kiosk , Interactive Kiosk , Interactive Touch Screen Kiosk , Aza mikasika Screen Kiosk ,